အထည်အလိပ် coated Antistatic အပူကိုခံနိုင်ရည် PTFE - တရုတ် Jiangsu KingRay Composite
PTFE TEFLON ဖန်မျှင်ထည် ...
အပူမဟုတ်သော Stick ကိုတှနျးလှနျ ...
PTFE coated ဖိုက်ဘာမှန် ...
Nonstick Surface က Teflon ...
Excellent ကဖြန့်ချိအိမ်ခြံမြေ ...
PTFE ဖြုတ်လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု ...
PTFE Teflon ဆဲလ်ဖုံး ...
porous PTFE အထည်အလိပ်
porous PTFE အထည်အလိပ်အရာ ...
အတူ porous PTFE ထည် ...
PTFE breathable ထည် ...
လေတိုက် Blade ကိုမှိုပီးလ် ...
PTFE Glassfiber coated ...
PTFE Teflon မီးဖို Mat
PTFE ပေါင်မုန့်ကင်ရာမီးဖိုကလေး Bag
BBQ PTFE မီးဖိုတောင်း
PTFE TEFLON ပေါ်ကို ...
Hashima ဖျူးစက် ...
Kannegiesser လမိုင်း ...
Meyer ဖျူးလမိုင်း ...
PTFE Teflon ဖျူး ...
ကော်ဖီ Dery စက် ...
Malt ဖုန်စုပ်ခြောက်စက် ...
အမှုန့် Separater Teflon ...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမိုင်း Teflon ...
Teflon ပီးလ်ဘို့ Plies ...
လေတိုက်စွမ်းအင် Blade ကို ...
လေတိုက်တာဘိုင် Blade ကို ...
PTFE အမြှေးပါး coated ...
PVC Windows ကိုဂဟေဆော်ခြင်း ...
PTFE TEFLON ကော်
ကိုယ်ပိုင်ကော် PTFE ...
PTFE Fiber Glass ကို ...
PTFE မျက်နှာဖုံးမှုတ်ဆေးဘူး ...
PTFE ကော်တိပ် ...
အပူကိုခံနိုင်ရည် PTFE ...
PTFE ဖန်မျှင်ထည် Indus ...
စင်ကြယ်သော Teflon ဖန်မျှင်ထည် ...
PTFE TEFLON ဖွင့် ...
PTFE ကွက်ပေါ်ကို ...
PTFE မဟုတ်သောချောင်းကို coated ...
non-ချောင်းကိုအပူ Resi ...
PTFE ပွင့်လင်းကွက် ...
High Quality မဟုတ်သော Stick ...
non-ကပ် High-အပူချိန် ...
Mach ထုပ်ပိုးလက်သုတ်ပုဝါ ...
ဆေးဆိုင် PTFE Teflon ...
non Stick က Surface ...
Silicon ရော်ဘာ ...
နှစ်ချက်ဘေးထွက် Silicon ...
PTFE TEFLON ဖန်မျှင်ထည်ထည်
anti-ငြိမ်အပူကိုခံနိုင်ရည် PTFE coated ထည်
အပူမဟုတ်သော Stick PTFE antistatic ပိတ်ထည်ကိုတှနျးလှနျ
Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက် Nonstick Surface က Teflon အထည်အလိပ်
Excellent ကဖြန့်ချိအိမ်ခြံမြေမဟုတ်သော Stick PTFE coated ထည်
ရေနံတင်သင်္ဘောသည် PTFE Teflon ဆဲလ်ဖုံး Havayar
breathable ဖြစ်သည့် porous PTFE အထည်အလိပ်
ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ porous PTFE ထည်
PTFE breathable ထည်, ပီးလ်သက်တမ်းထပ်တိုး PTFE ပိတ်စ
လေတိုက် Blade ကိုမှိုပီးလ်သက်တမ်းထပ်တိုး porous အထည်အလိပ်
non Stick အမြင့်အပူ PTFE coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်ကိုတှနျးလှနျ
PTFE Teflon Breathable ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
အဝတ်ဖျူးစက် Teflon ချောမွေ့စွာခါးပတ်
PTFE Teflon ဖျူးချောမွေ့စွာခါးပတ်
Hashima ဖျူးစက် Teflon ချောမွေ့စွာခါးပတ်
Kannegiesser လမိုင်း Teflon ချောမွေ့စွာအကြီးစားခါးပတ်
ခလုတ်နှင့်အတူမာတင်ဖျူးစက် Teflon ချောမွေ့စွာခါးပတ်
Meyer ဖျူးလမိုင်းစက် Teflon ချောမွေ့စွာခါးပတ်
Kevlar လမ်းပြကြိုးနှင့်-Oshima ဖျူးစက်ချောမွေ့စွာခါးပတ်
လေဟာနယ်ခြောက်စက်စက် Teflon ပေါ်ကိုခါးပတ်
Malt ဖုန်စုပ်ခြောက်စက်စက် Teflon ပေါ်ကိုခါးပတ်
ပျိုးပင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းခြောက်စက် Teflon ပေါ်ကိုခါးပတ်
ကော်ဖီ Dery စက် Teflon ပေါ်ကိုခါးပတ်
အမှုန့် Separater Teflon ပေါ်ကိုခါးပတ်
Quartz Powder Separater Teflon Antistatic Coveyor ခါးပတ်
ရာဘာစေးအမြှုပ်လမိုင်း Teflon ပေါ်ကိုခါးပတ်
ရာဘာစေးအမြှုပ်လမိုင်းစက် Teflon ပေါ်ကိုခါးပတ်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမိုင်း Teflon Rlease အထည်အလိပ်
နယူးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်လမိုင်း Teflon Rlease စာရွက်
Teflon ပီးလ်မှိုဖုန်စုပ်အိတ်များအတွက် Plies
လေတိုက်စွမ်းအင် Blade ကိုမှိုပီးလ် Plies PTFE အထည်အလိပ်
လေတိုက်တာဘိုင် Blade ကိုမှိုပီးလ်သက်တမ်းထပ်တိုး Teflon အထည်အလိပ်
လေတာဘိုင်ဖုန်စုပ်အိတ် porous ပီးလ်သက်တမ်းထပ်တိုးအထည်အလိပ်
အမြှေးပါးပစ္စည်းအထည်အလိပ် coated PTFE
အားကစားရုံဆောက်လုပ်ရေး PTFE Roll ပစ္စည်းအထည်အလိပ်
PVC Windows ကိုဂဟေဆော်ခြင်း Teflon အထည်အလိပ်
PTFE TEFLON ကော် ...
ဖြန့်ချိစက္ကူနှင့်အတူကိုယ်ပိုင်ကော် PTFE တိပ်
nom ချောင်းကို PTFE ဖန်မျှင်ထည်စက်မှုတိပ်
ကော်အတူ PTFE Fiber Glass ကိုအထည်အလိပ်
ဖြန့်ချိစက္ကူမပါဘဲ PTFE ကော်တိပ်
ဖြန့်ချိစက္ကူမရှိဘဲစင်ကြယ်သော Teflon ဖန်မျှင်ထည်ကော်အထည်အလိပ်
ပုံနှိပ်စက်သည် PTFE ကွက်ပေါ်ကိုခါးပတ်
ပုံနှိပ်များအတွက်မဟုတ်သောချောင်းကိုကွက်ပေါ်ကိုခါးပတ်နှင့်အခြောက်ခံစက် coated PTFE
ကောင်းသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောအပူ ptfe ပေါ်ကိုခါးပတ်ကိုတှနျးလှနျ
ခြောက်သွေ့စက်များအတွက် PTFE ပွင့်လင်းကွက်ပေါ်ကိုခါးပတ်
High Quality မဟုတ်သော Stick ပေါ်ကိုခါးပတ် PTFE mesh Surface
အစားအစာကိုလေမှုတ်စက်စက်များအတွက် non-ကပ် High-အပူချိန်ပေါ်ကိုခါးပတ်
စက် Teflon ခါးပတ်ထုပ်ပိုးလက်သုတ်ပုဝါ
non Stick က Surface မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ပေါ်ကိုခြောက်စက်
ဆေးဆိုင် PTFE Teflon ကွက်ခြောက်စက်ပေါ်ကိုခါးပတ်
အထည်အလိပ် coated နှစ်ချက်ဘေးထွက် Silicon
ပိုက်လိုင်းဂျာကင်အင်္ကျီအဘို့အ silicone အထည်အလိပ် Coating
တဦးတည်းဘေးထွက်အင်္ကျီကို Silicon အထည်အလိပ်
Printed Circuit B ကိုများအတွက် Nonstick Surface က Teflon အထည်အလိပ် ...
PTFE သားရေလမိုင်းများအတွက်ဖိုက်ဘာမှန်အထည် coated ...
Antistatic အပူကိုခံနိုင်ရည် PTFE အင်္ကျီအထည်အလိပ်
မြင့်မားသောအပူချိန်ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ် coated ကျေးကိုတှနျးလှနျ ...
အပူမဟုတ်သော Stick PTFE Antistatic အထည်အလိပ်ကိုတှနျးလှနျ
အခြေခံပညာအင်ဖိုမော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: KC9013BJ နောက်ထပ်အင်ဖိုထုပ်ပိုး: 10000sqm / နေ့အမှတ်တံဆိပ်: 100 / ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားလှိမ့် KFLON သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ, မူလအစ၏လေကြောင်း Place: တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 10000sqm / နေ့လက်မှတ်: သင်္ခါရ coated ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြ PTFE မတူပဲဖြစ်ပါသည် ပုံမှန် PTFE ထည် coated, ဒီထုတ်ကုန်အထူးဖော်စပ်ဆန့်ကျင်ငြိမ် PTFE ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆန့်ကျင်တည်ငြိမ်သော PTFE coated ထည်အသုံးပြုသနည်း ဤသည် PTFE ထည် antistatic နှင့်အပူစီးကူးဂုဏ်သတ္တိများရှိ coated ။ သူတို့ကအနက်ရောင်ဖြစ်ကြပြီး av အများမှာ ...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: KC9013BJ
ထုပ်ပိုး: 100 / လိပ်
productivity: 10000sqm / နေ့
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ, Air လေကြောင်းလိုင်း
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 10000sqm / နေ့
PTFE coated ထည် ထည် coated ပုံမှန် PTFE မတူဘဲဒီထုတ်ကုန်အထူးဖော်စပ်ဆန့်ကျင်ငြိမ် PTFE ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဆန့်ကျင်တည်ငြိမ်သော PTFE coated ထည်အသုံးပြုသနည်း
ဤသည် PTFE ထည် antistatic နှင့်အပူစီးကူးဂုဏ်သတ္တိများရှိ coated ။
သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ် / လျှပ်စစ်နှင့်အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အပူပလီကေးရှင်း antistatic non-ချောင်းကိုပေါ်ကိုခါးပတ်ကိုထုတ်လုပ်ဘို့ကို formats သို့ဖြတ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုကြသည်
ဆန့်ကျင်တည်ငြိမ်သော PTFE ၏အဓိကအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ထည် coated?
ထူခြင်း(မီလီမီတာ) max အကျယ်(မီလီမီတာ) အလေးချိန်(ဆ / m²) ဆန့်နိုင်အား(N / 50mm)
KC-9013BJ Black က 0,13 1250 275 1000/960
KC-9025BJ Black က 0.25 3200 560 2130/1150
KC-9035BJ Black က 0.35 3200 680 2350/1350
KC-9045BJ Black က 0.45 3200 680 2830/1650
သင်္ခါရထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း coated စံပြ PTFE ရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည် PTFE အထည်အလိပ်တိပ်အရည်အသွေးကိုအာမခံနေကြသည်။ ကျနော်တို့ Ptfe Teflon အထည်အလိပ်၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ကုန်ပစ္စည်း Categories: PTFE Glass ကိုအထည်အလိပ် coated Glass ကိုအထည်အလိပ်> ဆန့်ကျင်တည်ငြိမ်သော PTFE coated
PTFE coated ဖန်မျှင်ထည် အထည်အလိပ် / တိပ်တင်နိုင်ဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းထိရောက်သောဖြစ်သည့်၎င်း၏အဆင့်မြင့်အပူနှင့်ပွန်းပဲ့ခုခံကြောင့်ဤလျှောက်လွှာကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သည်။ ခြွင်းချက်လွှတ်ပေးရန်ဝိသေသလက္ခဏာများဟာမှိုကနေသန့်ရှင်းမှုကိုလွှတ်ဖို့ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်ခွင့်ပြုပါ။
ပွင့်လင်းကွက်လေမှုတ်စက်ခါးပတ်နှင့်အထူး application များအတွက် antiadhesive ခွဲထုတ်တစ်ရှူး
အစွန်းရောက်အခြေအနေများများအတွက်မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့်အတူ multi အလွှာလမိုင်းပေါ်ကိုခါးပတ်
Temperature- နှင့် PTFE- ကနေထုတ်လုပ်သောဓာတုယဉ်ပေါ်ကိုခါးပတ်နှင့်ဆီလီကွန်-coated ပိတ်ထည်
PTFE (Dupont အားဖြင့် Teflon) ခညျြအနှောများနှင့်သတ္တုပါး
မိမိကိုယ်ကိုကော် PTFE သတ္တုပါးနှင့်ကုတ်အင်္ကျီဖန်ပိတ်ထည်
Glass- နှင့် aramide- ပိတ်ထည်
မီတာအားဖြင့်သိုးမွေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်ဒြပ်ခံစားရတယ်, Tube နှင့်အဆုံးမဲ့ခါးပတ်ကျုံ့
ယခင်: မြင့်မားသောအပူချိန် PTFE Properties ကိုအတူ coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်ကိုတှနျးလှနျ
နောက်တစ်ခု: သားရေလမိုင်းစက်များအတွက် PTFE အင်္ကျီကိုဖိုက်ဘာမှန်အထည်
ကုတ်အင်္ကျီ Antistatic PTFE ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
PTFE သားရေ lamina များအတွက်ဖိုက်ဘာမှန်အထည် coated ...
နေရပ်လိပ်စာ: Jiangsu KingRay Composite ပစ္စည်း Co. , Ltd မှ။
E-mail ကို: alextx@aliyun.com